Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee Gurmadka degdega ah - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Gargaarka Degdegga ah > Bixiyaha Degdegga ah
Bixiyaha degdega ah wuxuu ku qalabaysan yahay ambalaasta si uu u daboolo baahiyaha xaaladda wuxuuna ku habboon yahay bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah inay jiifsadaan. Sababtoo ah sariirta lafteedu waa culus tahay, way adag tahay in la qaado.
Bixinta degdega ah waxay ka samaysan tahay daawaha aluminium tayo sare leh iyo barkin xumbo. Waxaa loo isticmaalaa ambalaas, isbitaal, goobta dagaalka iyo jimicsiga si loogu qaado dhaawacyada iyo kuwa buka.
Isticmaalka fidiyaha degdega ah, si dadka buka iyo kuwa dhaawacmay ay u jiifsadaan raaxo. Gacmaha telescopic ayaa lagu habeeyey labada daraf si ay u fududeeyaan qaadista barellada.
Qabo qaab dhismeedka hoose, wuxuu ku dhaqaaqi karaa dhulka, kor ayuu u qaadi karaa si uu u socdo.
Waxaan bixinaa Chair Stretcher, kaas oo ah shay ku habboon waayeelka, dhalinyarada. Bareelo loogu talagalay ambalaaska si ay u daboolaan baahida bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah si ay u jiifsadaan. Sababtoo ah miisaanka sariiraha laftiisa ayaa culus, way adagtahay in la qaado.
Kala Bixinta Basketka
Waxaanu bixinaa Basket Stretcher, kaas oo ah shay ku habboon waayeelka, dhalinyarada. Bareelo loogu talagalay ambalaaska si ay u daboolaan baahida bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah si ay u jiifsadaan. Sababtoo ah miisaanka sariiraha laftiisa ayaa culus, way adagtahay in la qaado.
Majarafad kala bixisa
Waxaan bixinaa Shovel Stretcher, kaas oo ah shay ku habboon waayeelka, dhalinyarada. Bareelo loogu talagalay ambalaaska si ay u daboolaan baahida bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah si ay u jiifsadaan. Sababtoo ah miisaanka sariiraha laftiisa ayaa culus, way adagtahay in la qaado.
Waxaan bixinaa Laab-laabashada, kaas oo ah shay ku habboon waayeelka, dhalinyarada. Bareelo loogu talagalay ambalaaska si ay u daboolaan baahida bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah si ay u jiifsadaan. Sababtoo ah miisaanka sariiraha laftiisa ayaa culus, way adagtahay in la qaado.
Kala Bixiyaha Fudud
Waxaan bixinaa Strecher Miisaanka Fudud, kaas oo ah shay ku habboon waayeelka, dhalinyarada. Bareelo loogu talagalay ambalaaska si ay u daboolaan baahida bukaanka iyo kuwa dhaawaca ah si ay u jiifsadaan. Sababtoo ah miisaanka sariiraha laftiisa ayaa culus, way adagtahay in la qaado.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Bixiyaha Degdegga ah oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Bixiyaha Degdegga ah soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Bixiyaha Degdegga ah la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.